Akụkọ - Canopy nyocha iji ghọta ezi ihe ọkụkụ nke ihe ọkụkụ
Onye na-enyocha ihe mkpuchi na-arụ ọrụ dị mkpa na uto nke ihe ọkụkụ, ọ dịkwa nnukwu mkpa ịmara ezi ihe ọkụkụ nke ihe ọkụkụ. Canopy bụ akụkụ nke ihe ọkụkụ a hụrụ site n'elu ruo na ala, nke dị ka okpu. Ndị na-eme nchọpụta na-achọtakarị ụfọdụ “ihe nzuzo” banyere osisi sitere na ya. Na-ewere oka dị ka ihe atụ, kanopi Ọdịdị nke ibu elu mkpụrụ ọka nwere ike ikpughe physiological usoro nke ibu nnukwu mkpụrụ e guzobere, ma nye usoro iwu ndabere maka nnukwu mkpụrụ cultivation nke kụrụ. Agbanyeghị, iji hụ na nyocha ahụ ziri ezi, a ga-eji akụrụngwa ndị ọkachamara maka atụ.
O nwere ike ịbụ na ị gaghị ama usoro mkpuchi ahịhịa nke osisi. Ka anyị were ọka dị ka ihe atụ. Ihe owuwu mkpuchi ga-emetụta mkpụrụ na ogo nke ọka, n'ihi na ezigbo ihe mkpuchi nwere ike ime ka arụmọrụ nke photosynthetic nke akwụkwọ ọka, nke na-enyere aka nchịkọta nke ume na nkwalite nke uto na mmepe. Ihe nyocha ihe omimi nke osisi na-eji ihe ntanye anya na nso nso nke infrared na otutu ihe omuma ihe omuma nke nwere ike ichoputa ahihia ahihia na ihe omuma, ma nyochaa akwukwo ahihia RVI, NDVI, akwukwo ahihia akwukwo nitrogen, nitrogen ìgwè, akwukwo ebe index, akwukwo akọrọ arọ na ndị ọzọ na parameters site na software.
Site n'iji igwe ihe nyocha iji tụọ ma nyochaa ahịhịa ahịhịa, anyị nwere ike ịmata ezi ọka dị nso na-akụ ọka. Ezigbo ihe ọkụkụ nwere ike iji ìhè anyanwụ, mmiri, ikuku, ikpo ọkụ na nri, jikọta esemokwu dị n'etiti otu na ndị mmadụ n'otu n'otu, hụ na uto ahụike na mmepe nke ndị mmadụ n'otu n'otu maka mmepe otu, iji meziwanye mkpụrụ kwa mpaghara. nke ọka.
Ke ofụri ofụri, kanopi analyzer adịghị emerụ ihe ubi n'uba. Ojiji ya nwere ike ọ bụghị naanị belata nsogbu nke nyocha ihe owuwu kanopi, kamakwa melite mkpụrụ akuku. Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere usoro mmesoro ọdịnala, ọ nwere ike izere adịghị ike nke mmebi ahịhịa. Ọ nwere uru nke mma, enweghị oge, oke data nnweta na ihe ndị ọzọ. Ọ dị nnọọ mma maka nyocha ọrụ ugbo nke oge a akụrụngwa n'ọtụtụ ebe na ọrụ ugbo, ịkọ ahịhịa, ihe ọkụkụ metụtara oke ozuzu, ozuzu, nhazi ọnụ ọgụgụ nke osisi na mmepe nke nkuzi, ọrụ nyocha, nwere ike inyere ndị mmadụ aka ịkọ ihe na sayensị, njikọta spam, nke mere na kụrụ na ọnọdụ ọnọdụ uto dị mma karị.